တင်မောင်ထွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဦးတင်မောင်ထွန်း (Rev. Dr) ၂၀နိုဝင်ဘာ၁၉၃၁ မွေးဖွားသည်။ မြန်မာခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးသည် ၁၉၆၇မှ စတင်ပြီး ဟေဗြုန်ညီအစ်ကိုများအသင်းတော်၏ သင်းအုပ်ဖြစ်ပြိး အမှုဆောင်ခဲ့မှုများကြောင့် ၁၉၉၈ခုနှစ်တွင် International Biography Centre, Cambridge မှ ပါရဂူဘွဲ့ ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပါသည်။
ညီအစ်ကိုများအသင်းတော်၊ သင်းအုပ် WFC Witness for Christ Ministry - ၁၉၇၃မှစတင်လုပ်ဆောင်သည်။ Literature Evangelism ခရစ်ယန်စာပေထုတ်ဝေခြင်း၊ ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြုလစဉ်စာစောင်ထုတ်ဝေခြင်း ကျမ်းစာသင်တန်းများ (အချိန်ပိုင်း၊ ရက်တို၊ ရက်ရှည်သင်တန်းများကို ဖိလစ်ပိုင်၊ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းသာသင်တန်းများမှ ဘာသာပြန်ပြီးသင်ကြားပေးခြင်း။ စာပေးစာယူကျမ်းစာသင်တန်း ကျမ်းစာကျောင်းပြီးသူများအား Associate Workers အဖြစ် အစေခံခြင်း ရေဒီယိုဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း (ဖိလစ်ပိုင်အရွှေ့ဖျားအသံလွှင့်ဌာန) လူမှုရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ.. စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဆရာကြီးတါင် သား၃ယောက်နှင့်သမီး၅ယောက်ရှိပါသည်။ သားကြီးဖြစ်သော ဦးဖော်ဝင်းထွန်း ပြည်ပသာသနာပြု (မနီလာ၊ အရှေ့ဖျားအသံ)၊ ဒုတိယသား ဆရာဦးဇော်မင်း (Rev. Dr) ထိုင်းနိုင်ငံ အမ်စီအေအသင်းတော်သင်းအုပ်ဆရာ တို့ဖြစ်ပါသည်။
↑ ဘားမိစ်ဘိုင်ဘယ်, ဆရာကြီးဦးတင်မောင်ထွန်း
↑ မြန်မာဘာသာ၊တရားဟောချက်များ, မုရန်အင်တာနက်မဂဇင်း
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တင်မောင်ထွန်း&oldid=282642" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅၊ ၀၅:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။